Bitcoin Bank of Bank Account Accepting Cryptocurrency
Bitcoin Bank of Bank Account
Bitcoin iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' waa kuwo kulul, mowduucyada maanta isbeddelaya. Si kastaba ha noqotee, macluumaad aad u badan ayaa ku dul wareegaya taas oo ka dhigi karta isticmaalka Bitcoin u muuqato mid jahwareer leh. Xaqiiqda, Bitcoin waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Sida daawashada telefishanka, uma baahnid inaad fahanto waxyaabaha ku saabsan sida TV-ga uga shaqeeyo si aad u awood u yeelato inaad u isticmaasho.
Markaad yeelato Bitcoin, waxaad u baahan kartaa inaad ku gasho qaab dhaqameed. Ka dib oo dhan ma aha qof kasta, iyo gaar ahaan maahan mid kasta bangigu aqbalo Bitcoin. Isla mar ahaantaana, waxaad ubaahnaan kartaa inaad dammaanad qaaddo heerka asturnaanta iyo qarsoodi lacagta lacagta digital-ka ah. Si taas loo gaaro, dad badani waxay raadiyaan cryptocurrency ama Xisaabta bangiga ee Bitcoin. Si kale haddii loo dhigo, waxay rabaan meel ay ku kaydiyaan lacagtooda elektaroonigga ah meel uga durugsan app taleefannadooda gacanta; ama meel loogu beddelo lacag caddaan ah oo lagu dhigto dibadda iyadoo laga faa'ideysanayo bangiga badda.
Jawaabtaada gaaban, waxaad kula yeelan kartaa sheeko xirfad leh khibrad leh adiga oo isticmaalaya lambarka taleefanka ama foomka su'aalaha boggan. Waxaan helnaa akoonno bangiyo bangiyeed oo hoy u ah Bitcoin iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrency'. Dhanka kale, ka sii aqri faahfaahin dheeraad ah.
Marka hore, waa maxay Bitcoin? Bitcoin waa lacag laga sameeyay 2009. Waa nooc lacagta dijitaalka ah ee baahinta. Waxay u saamaxaysaa adeegsadayaasha inay si dhaqso leh u bixiyaan lacagaha qof kasta oo ka mid ah adduunka. Bitcoin waxay ku shaqeysaa iyada oo aan loo dejin sharciyeyn. Taas bedelkeeda, Bitcoin waxay adeegsataa tikniyoolajiyada isku faca. Shabakada Bitcoin ayaa si wada jir ah u fulisa maaraynta lacagaha iyo soo saarista lacagta. Satoshi Nakamoto wuxuu asal ahaan horumariyey Bitcoin. Waxaan aaminsanahay in magacu uu yahay magac loo yaqaanay asal ahaan uu asal ahaan isticmaalo. Dadweynaha ma yaqaanaan magaca dhabta ah ee qofka ama dadka soo saaray Bitcoin. Bitcoin waxaa markii hore lagu sii daayay ruqsad MIT ah.
Bitcoin waxaa loo isticmaali karaa iibsashada iyo iibinta alaabada iyo adeegyada si la mid ah lacagta lacagta caadiga ah. Isticmaalayaasha ayaa iibsan kara pizza, kaararka hadiyadda ee Amazon, iyo waxyaabaha kale ee caadiga ah sida lacagta kaararka iyo kaararka deynta. Markaad ka fekereyso sida Bitcoin u shaqeyso, way fududahay in la isbarbar dhigo Bitcoin oo la adeegsado kaarka deynta. Marka qofka haysta koontada bangiga ay isticmaalayaan nidaamkooda bangiga ee internetka, waxay helayaan lacag digital ah. Kuwa ku leh akoonka bangiga waxay isticmaali karaan nidaamka qadka tooska ah si ay u diraan oo u helaan wareejinta taleefannada. Xawaaladahaani waxay matalaan qiimo lacageed oo lagala noqon karo lacagta waraaqaha. Isku mid ayaa suurtagal ah Bitcoin. Bitcoin ayaa lagu beddeli karaa doolarka Mareykanka, Euros, ama qaab kale oo lacag ah. Waxaa sidoo kale laga iibin karaa si toos ah alaabada ama adeegyada.
Si ka duwan bangiyada, si kastaba ha ahaatee, macaamilada la isticmaalay Bitcoin waxaa la sameeyey iyada oo aan midkoodna dillin. Intaa waxaa sii dheer, ma jiraan khidmadaha macaamil ganacsi ee la xidhiidha Bitcoin. Bitcoin sidoo kale ma laha shuruudaha kashifaadda. Ganacsato badan iyo kuwo kale ayaa bilaabay inay aqbalaan Bitcoin iyo noocyo kale oo cryptocurrency ah. Bitcoin ma ahan lacagta keliya ee dijitaalka ah. Waxaa sidoo kale jira Ethereum, Litecoin, iyo kuwa kale. Bitcoin ayaa ah tan ugu caansan uguna caansan.
Sidee Bitcoin u shaqeysaa?
Aad bay u fududahay in la bilaabo isticmaalka Bitcoin. Talaabada koowaad waa inaad isticmaasho casriga ah oo aad soo dejiso app kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala inay iibsadaan ama ku helaan Bitcoin. Barnaamijyadan waxaa caadi ahaan loo yaqaanaa boorsooyinka Bitcoin. Barnaamijka ugu caansan waxaa lagu magacaabaa Coinbase. Isticmaalayaashu waa inay raacaan tilmaamaha ku yaal barnaamijka si ay ugu xiraan koonto bangi ama kaarka deynta ee barnaamijka. Xaashiyaha kuwa magaca isticmaalaha internetka iyo lambarka sirta ee bangiga ayaa ku xiraya lambarka koontada bangiga. Xaqiijinta lacag-dhigashada yar-yar ee la sameeyay muddo hal ilaa saddex maalmood ah ayaa waliba xiri kara.
Isku dheellitirka Bitcoin waxaa lagu kaydiyaa waxa loo yaqaan 'blockchain'. Xannaanadu waa dad wadaag ah oo wadaag ah. Shabakada dhan ee Bitcoin waxay ku tiirsan tahay blockchain. Dhamaan muquqiyaadka la xaqiijiyay ayaa ku jira hoggaanka. Sidan, jeebka Bitcoin ayaa xisaabin kara dheelitirnadooda. Macaamilada cusub ayaa la xaqiijin karaa si loo hubiyo in Bitcoins la isticmaalo dhab ahaantii ay leedahay lahjada. Xasilloonida iyo nidaamka taariikh ahaaneed ee xannibaadda ayaa ah mid ammaan ah. Waxaa lagu dhaqangeliyaa xog-haynta si loo ilaaliyo asturnaanta dadka isticmaala Bitcoin.
Xawaaladaha Bitcoin waa wareejinta qiimaha u dhexeeya boorsooyinka Bitcoin. Macaamilshadan waxaa lagu diiwaan geliyay blockchain. Boorsooyinka Bitcoin waxay hayaan xog sir ah oo la yiraahdo a fure gaar ah ama abuur. Xogtan waxaa loo isticmaalaa in lagu saxeexo macaamilada. Saxiixan wuxuu u dhaqmayaa sidii caddeyn xisaabeed oo muujineysa inay ka yimaadeen milkiilaha boorsada habboon ee Bitcoin. The saxiixa waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in looga hortago in macaamilka laga beddelo qof kasta marka la soo saaro. Xilliga xaqiijinta ee ka dambeysa macaamil xawaareynta Bitcoin waa mid aad u gaaban. Dhammaan lacagaha la wadaago waxaa laga helaa dadka isticmaala. Sida caadiga ah shabakad badanaa waxay xaqiijinayaan iyaga ku saabsan daqiiqado 10.
Iibsashada Bitcoin waa wax aad u fudud. Si aad u iibsato Bitcoin, dadka isticmaala riix badhanka iibsiga ee app in ay isticmaalayaan sida a Bitcoin jeebka. Koontada isticmaalaha ayaa horeyba loogu xiriirinaa app-ka sidaa darteed looma baahna in dib loo galo macluumaadka lacag bixinta. Isticmaaluhu wuxuu markaa galayaa qadarka ay doonayaan inay iibsadaan. Ugu dambeyntii, dadka isticmaala rukunka iibsanaya iyo macaamilka ayaa la dhammeeyaa. Taasi waa mid fudud.
Waxaan ugu yeernaa suuq suuq dijital ah, sida dalabka casriga ah halkaas oo dadku ka ganacsan karaan lacag caddaan ah oo loogu talagalay Bitcoin oo loo rogi karo Bitcoin sarrifka. Nidaamka noocan oo kale ah wuxuu bixiyaa qaab ay dadku uga ganacsan karaan lacagta digital'ka ee doolar, euro, yen, iwm.
Adeegso 'Coinbase App' si aad U Bixiso ama Bixiso
Bitcoin waxaa loo adeegsan karaa sameynta ama bixinta lacagaha si dhakhso ah oo fudud iyadoo la adeegsanayo boorsada Bitcoin, sida Coinbase. On the Coinbase app, waxaa ku yaal aalad QR code oo loo isticmaali karo in lagu abuuro koodh elektiroonig ah oo lagu bixiyo lacag bixinta Bitcoin. Lacag qaataha loogu talagalay ayaa taabanaysa sumadda oo nambarka QR ayaa la muujiyaa. Isticmaalayaasha ayaa markaa la wadaagi kara QR-code, xarafka la xidhiidha xarfaha ama cinwaanka emailka ee la xidhiidha qoraalka iyada oo la bixinayo lacag bixinta.
Sidee Looga Helaa Bitcoin Isticmaalka Coinbase
Lacag helida way fududahay. Kuwani waa tilmaamaha sida qoraalkani yahay. Haddii barnaamijka isbeddelay ilaa qoraalkan, qaar ka mid ah tilmaamaha ayaa kala duwanaan kara.
Xulo astaanta "Heshiiska" icon dhinaca hoose ee barnaamijka Coinbase
Xulo boorsada Bitcoin (BTC).
Xul astaanta QR code ee geeska kore ee sare ee barnaamijka.
Xulo "Cinwaanka Muujinaya"
Guji "Wadaag" si aad u qorto ama u dirto cinwaankaaga Bitcoin ama "Nuqul cinwaanka" si markaas si fudud loogu dhejiyo cinwaankaaga Bitcoin qoraal ama emayl.
Mar haddii aad la wadaagto cinwaankaaga Bitcoin qofkii ku siiya, isaga ama iyadu way raaci karaan tilmaamaha "Sida loo Bixiyo Qof ..." tilmaamaha hoose.
Sida loo Bixiyo Qof qaba Bitcoin isticmaalaya Coinbase
Si loo sameeyo lacagta Bitcoin qof kale, adeegsaduhu wuxuu codsan karaa in qofka lacagta qaata ama uu soo diro emaylka akoonkiisa ama lambarkiisa.
Qofka lacagta bixinaya wuxuu markaa riix doonaa sumcadda xisaabaadka xagga hoose ee barnaamijka.
Xulo mid boorsada Bitcoin ah (ama lacag kale oo laxiriirta).
Ka dib taabto hal kuyaal geeska midig ee sare ee barnaamijka 'Coinbase'.
Bogga xiga, geli qaddarka.
Bogga soo socda, koobi oo ku dheji lambarka koontada ama cinwaanka emaylka la socda ee barnaamijka 'Coinbase'. Gali qoraallada lacag-bixinta ee habboon.
Guji guji. Kadib xaqiiji bixinta.
Tani waxay u shaqeysaa si la mid ah sameynta wareejinta silig iyadoo la adeegsanayo lacagta caadiga ah.
Bitcoin ayaa caan u noqotay maxaa yeelay waxay siisaa dadka isticmaala faa iidooyin badan lacagta lacagta caadiga ah. Mid ahaan, waxaad u isticmaali kartaa Bitcoin si aad u sameyso iibsiyada si gaar ah. Mid kale, Bitcoin uma baahna wax Aqoonsi ah oo loo adeegsado. Tani waxay ka dhigeysaa lacag ku habboon dadka aan dooneynin inay noqdaan wax aan qarsooneyn. Waxay kaloo ku habboon tahay is-oggaanshaha ama kuwa ku nool meelaha kaabayaasha dhaqaalaha aan horumarin lahayn.
Barnaamijka softiweerka ah ee 'Bitcoin' si weyn ayaa loo xafidayaa Natiijo ahaan, kiisaska Bitcoin la jabsaday waa mid naadir ah. Ku dhowaad dhammaan kiisaska jira ee jabsiga ayaa dhacay markii qofka Bitcoin haysto ee taxaddar la'aan leh lambarka sirta ah ee koontada ay ku jiraan. Ilaa iyo inta erayga sirta ah la ilaaliyo, Bitcoin waxay bixisaa nabadgelyo aad uga badan tan lacagta caadiga ah.
Way u sahlanaan laheyd tuugleey inuu xado lacag ku keydsan guriga intii ay u ahaan laheyd iyaga inay xadaan Bitcoin bilaa lambarka sirta ah. Diiwaanka diiwaan geliya iibsadayaasha iyo iibiyaasha Bitcoin waligood lama muujin. Kaliya Aqoonsiga boorsada ee dadka isticmaala Bitcoin ayaa la muujiyay. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay sii xafidaan sirta isla markaana sameysashada wax iibsiyada iyo iibka si fudud. Isticmaalka Bitcoin waa sharci ahaanba waa sharci. Waxaa loo adeegsan karaa nooc kasta oo macaamil sharciyeed ah isku mid ah oo loo isticmaalo kaararka lacagta caddaanka ah iyo kaararka deynta.
Adeegsiga Caalamiga ah
Bitcoin waa mid aan xad lahayn oo uma baahna rukhsad si loo isticmaalo. Qoraalkan, looma xakameynayo waddan kasta oo adduunka ah. Taasi waxay u eg tahay inay is beddeleyso. Lacagtu waa faafreeb u adkaysiga maxaa yeelay qofna ma awoodo inuu xannibo ama xayiro macaamil kasta oo lacag ah. Biximaha caalamiga ah sidoo kale way fududahay in lagu sameeyo Bitcoin maxaa yeelay lacagtu kuma xirna sharci gaar ah.
Sidaas darteed, ayaa sidoo kale la baabi'iyey khidmadaha lacagaha lagu beddelo. Isticmaalka Bitcoin ayaa sidoo kale baabi'inaysa khidmado kale oo la mid ah macaamil maaliyadeed, sida khidmadaha kaararka deynta. Dadka qaar waxay u iibsadaan Bitcoin sidii maalgashi. Waxay sidaas sameeyaan iyagoo rajeynaya in Bitcoin ay kordhin doonto qiimaha sannadaha. Taariikhda lacageed ee ugu dambeysay waxay muujineysaa in qiimeynta sii socota ay u badan tahay, laakiin Bitcoin ayaa laga yaabaa ama ma noqon karto mid waxtar u leh sidii maalgashi. In kasta oo aan soo aragnay horumar sii kordhaya oo waayihii hore, haddana aan la dammaanad qaadayn inuu waxaas dhici doono mustaqbalka.
Qiimaynta Lacagta waxay noqon kartaa mid aan la saadaalin karin. Sidan, qiyaasta qiimeynta Bitcoin kama duwana ka fikirka lacagaha caadiga ah. Si fudud loo dhigo, Bitcoin waa hab wax lagu iibsado. Habka ay u marayaan waa haddii qof kale soo raaco oo diyaar u ah inuu bixiyo wax ka badan intaad ahayd.
Faa'iidada ugu muhiimsan ee Bitcoin ma aha qiimaha ay tahay maalgashiga, laakiin khaaska ah ee ay bixiso. Sababtoo ah dadka isticmaala Bitcoin uma baahna inay is diiwaan-geliyaan magacyadooda, macaamiladu wali qarsoodi. Bitcoins looma daabicin karo ama laga hadli karo. Kaliya 21 million million Bitcoins abid doonaa. Ma laha kharashka kaydinta oo ha qaadin meel kasta oo muuqaal ah. Natiijo ahaan, Bitcoin waxaa laga yaabaa inuu si fiican u cadeeyo lacagta cusub ee caalamiga ah.
Bitcoin ma yareyn doonto baahida loo qabo gawaarida sharci-darrada ah ee gawaarida ilaalinta hantida. Dhab ahaantii, ta soo horjeeda waa run. Isticmaalka shirkadaha ganacsiyada dibadda waxay dhab ahaantii kordhin karaan asturnaanta iyo ilaalinta ayadoo la isticmaalayo Bitcoin.
Waxaa suurtagal ah in la kordhiyo asturnaanta gaarka ah iyada oo loo marayo isticmaalka Bitcoin iyada oo la diiwaangelinayo xisaabaadka dijitaalka ah ee la xidhiidha Bitcoin si shirkad dibadeed. Tani waxay abuureysaa lakab dheeraad ah oo kala gooni u dhaxaysa Bitcoin iyo milkiilahooda. Natiijo ahaan, farsamadani waa mid aad u qiimo badan oo loogu talagalay ilaalinta hantida. Ilaalinta ugu wanaagsan ee Bitcoin waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo isticmaalka shirkad ka baxsan dhulka.
Shirkadaha shidaalka ayaa bixiya ilaalinta ugu fiican ee Bitcoin sababtoo ah wadamada sida Nevis, Belize iyo Islands Cook, maaha kuwo la xiriira xukunka gudaha. Natiijo ahaan, haddii xukun lagu sameeyo qof Maraykan ah, deyntaas qofka ayaa yeelan doona waqti adag oo ku amraya in xabsiyada Bitcoin lagu qabto xisaab diiwaan gashan shirkad kale oo ka baxsan dhulka. Ma jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Bitcoin akoonka bangiga? Waxaad isticmaali kartaa nambarada ama foomka su'aalaha boggan si aad ula hadasho sheeko xirfad leh.
<Illaa cutubka 12